Home TORO FARANY AFRICAN George Weah Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny andriamanitra Football sy ny filoha izay fantatry ny anarany manokana; 'King George'. Ny rakitsary George Weah momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy momba ny tantaram-piainam-pirenena dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny Analysis dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-pifandraisana ary ny zavatra hafa tsy fantatra momba azy momba ny OFF-Pitch.
Eny, fantatry ny rehetra ny anjara asan'ny ballon d'or na ny Liberia, saingy vitsy no mihevitra ny mombamomba an'i George Weah izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
George Weah Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Voalohandohan'ny fiainana
George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah dia teraka tamin'ny 1 Oktobra 1966 (taona 51), Monrovia, Liberia.
I George dia nentin'ny renibeny taorian'ny nahafatesan'ny rainy. Nipoitra tany West Point izy, ary nisy andian-jiolahy nanodidina azy. Mpikambana ao amin'ny Kru vondrona foko, havandra avy any atsinanan'i Liberia Grand Kru County, iray amin'ireo faritra mahantra indrindra ao amin'ny firenena.
George Weah Storyhood
Nanatrika sekoly ambaratonga faharoa tao amin'ny Kongresy Muslim sy sekoly ambaratonga faharoa tao Wells Hairston High School izy ary voalaza fa nilatsaka tamin'ny taona farany nianarany. Izy dia nanomboka nilalao baolina ho an'ny fikambanan'ny tanora mpigadra tanora tamin'ny taona 15 ary dia nifindra tany amin'ny klioban'ny mpilalao baolina kitra any an-toerana, nihevitra ny anjara toeran'ny mpanohana an'i Mighty Barrolle sy ny tsy fantatra amin'ny tsy fantatra, izay nahazoany ny tanjona 24 tao amin'ny 23.
Taorian'ny nitsanganany tamin'ny laharam-pirahalahiana, dia nahita mpaka sary iray avy any Kamerona nahita azy ary nanao sonia azy ho club club eo an-toerana, Yaound side FC. Ilay scout Cameroon Claude Le Roy, dia namoaka vaovao momba ny fahaiza-manaon'i Weah ho an'i AS Monaco mpitantana Arsène Wenger. Nidina nankany Afrika i Wenger mba hijery ny tenany ary nanasonia an'i Weah tao amin'ny kliobany.
Talohan'ny nahalasa ny asany tamin'ny lalao baolina kitra dia nikarakara ny Liberia Telecommunications Corporation izy technician switchboard. Izy no voalohany, ary saika ny Liberiana ihany no nanao marika tany Eoropa. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
George Weah Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Relationship Life
Clar Weah dia vadin'i George Weah. Amerikana avy any Jamaika izy ary avy any Jamaika.
George sy Clar
Nihalehibe tao Floride, Etazonia izy, izay nahitàna orinasa maromaro, anisan'izany ny trano fisakafoanana Karaiba sy fivarotana fivarotana.
Araka ny tatitra dia nihaona tany Etazonia i George sy Clar tany amin'ny sampana Chase Bank izay niasan'i Clar ho mpiasan'ny mpanjifa. Ilay mpikomy AC Milan teo aloha dia voalaza fa nandeha tany amin'ny banky mba hanokatra kaonty rehefa nahitana ny Jamaikana tsara tarehy ny masony. Niala moramora ny tantaram-pitiavany ary nitombo hatrany izy ireo na dia maromaro aza ny tsaho momba ny fanitsakitsahana an'i Weah.
Clar, izay tsy mitovy amin'ny ankamaroan'ny vehivavy karakaina any Karaiba, ny akanjo tsotra fotsiny, dia heverina ho toy ny stratejika mahavariana fa mpitaingina tsara ihany koa, ka ny tsikitsiky mamirapiratra na dia ao anatin'ny fotoana sarotra aza dia afaka manapaka sakana. Ireo firaiketana akaiky dia manoritsoritra azy ho marani-tsaina ary manana karazana aura manokana. Ny Jamaikana dia manana hery be eo amin'ny vadiny. Izy roa dia samy manana zanaka telo: George Weah Jr, Tita sy Timoty.
Timothy Weah, zanak'i 1995 Ballon d'Or mpandresy George Weah, dia nanao sonia ny fifanarahana ara-barotra voalohany nataony tamin'i Paris Saint-Germain.
Zanak'i George Weah-Timoty
Ny fahatongavan'i 17 taona taona dia nanaraka ny dian'ny rainy, izay nandany telo taona tao amin'ny klioban'ny Ligue 1, talohan'ny nifindrany tany AC Milan. I Timote dia nanatevin-daharana ny PSG tamin'ny 2014 ary nasongadiny ho an'ny U-15 sy U-19.
George Weah Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny rainy, William T. Weah, Sr. mpahay siansa raha i Anna Quayeweah reniny dia mpivarotra. Manana rahalahy telo izy, William, Moses ary Wolo.
George Weah dia iray amin'ireo ankizy telo ambin 'ny laharam-pahamehan' ny renibeny, Emma Klonjlaleh Brown taorian'ny nisarahan'ny ray aman-dreniny.
George Weah Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Fahombiazan'ny Eoropeana
Eny, talenta mena tsy dia niofana loatra izy. I Weah dia nipoitra tampoka teo amin'ny asany Eoropeana. Na dia izany aza, ilay mpiloka 6'2 mahery dia nahatratra ny fifaninanana ary nanjary lasa mpilalao sarotra mahafaty.
Fifindran-dalana mankany Paris Saint-Germain dia nitondra fankasitrahana bebe kokoa noho ny Weah, izay nanampy ny kliobany hahazo ny Fiadiana Frantsay amin'ny 1993 sy ny lohatenin'ny Ligue 1 ao 1994. Tsy azo sakanana mandritra ny vanim-potoana 1994-95 izy no nitondra ny PSG tamin'ny fandresena tamin'ny Frantsay sy Ligne ary nahavita azy ho mpilalao baolina kitra. Taorian'ny taona, dia nantsoina hoe Afrikana, Eoropeana ary FIFA Mpilalao Sarimihetsika ny Taona izy-fahombiazana tsy nisy toy izany.
George Weah Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -ady
Weah dia voarara tamin'ny lalao enina Eoropeana noho ny famongorana ny oron'ny mpiaro ny portiogey Jorge Costa tamin'ny 20 November 1996 tao amin'ny tunnel mpilalao taorian'ny nanaovan'i Milan tao Porto ao amin'ny Ligin'ny Champions. Niteny i Weah fa nipoaka ny fahasorenany rehefa avy namono fanavakavaham-bolonkoditra Costa Nandritra ny fararano dia nandritry ny ekipan'ny ligin'ny Champions League.
Nandà ny fiampangan'ny fanavakavaham-bolon-koditra i Costa ary tsy voampanga tamin'ny UEFA fa tsy nisy vavolombelona afaka nanamarina ny fiampangan'i Weah, na dia ny ekipan'i Milan aza. Nanandrana niala tsiny tamin'i Costa i Weah tatỳ aoriana saingy nolavin'ny Portioge izany, izay nihevitra fa ny fiampangan'ny fanavakavaham-bolon-koditra dia nanohitra azy ho fanalam-baraka ary nitondra ny fitsarana Liberiana.
Nitarika ny fandidiana ny endriky ny tarehin'i Kosta izany ary navotsotra nandritry ny telo herinandro. Na dia teo aza ny zava-nitranga dia nahazo ny FIFA Fair Play Award tao amin'ny 1996 i Weah.
George Weah Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -fivavahana
Weah dia niova fo avy amin'ny Kristianisma protestanta ho amin'ny finoana silamo, talohan'ny nivadika indray. Manantena fiadanana ho an'ny silamo sy ny kristiana izy, ary milaza izy ireo "Vahoaka iray".
Nampianatra ny Protestanta ihany koa i Weah.
Tamin'ny volana 2017 tamin'ny Oktobra, dia hita tao amin'ny fiangonana Nizeriana malaza tao Pastor TB Joshua izy sy ny Pretra Yormie Johnson, Loholona Liberiana.
TB I Joshua dia lazaina fa fitaovana goavana amin'ny fanapahan-kevitr'I Johnson hanohana ny kandidàn'i Weah ao amin'ny fifidianana Liberia 2017.
George Weah Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Zanakalahin'i Liberia
Nanjary nandray anjara mavitrika tamin'ny raharaham-bahiny tao an-tanindrazany i Weah raha mbola teo am-panaovana ny asany.
Nahafantatra ny maha-zava-dehibe ny baolina kitra ho hery miorina mafy any Liberia i Weah ka nandany $ 2 tapitrisa dolara tamin'ny volany manokana, ny lozam-pifamoivoizana, ary ny fandaniana ho an'ny ekipa nasionaly, ny Lone Stars.
George Weah Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -toetra
George Weah dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
hery: George Weah dia mpiara-miasa, diplomatika, tsara fanahy, tia rariny, sosialy
fahalemena: George Weah dia mety ho tena mahavariana ary manana ny toetrany feno fangorahana. Mihoatra lavitra noho izany dia misoroka fifandonana izy ary afaka miteraka alahelo.
Inona no tian'i George Weah: Harmony, fahalemem-panahy, fizarana amin'ny hafa ary fiainam-baovao any ivelany.
Inona no tsy nankasitrahan'i George Weah: Herisetra, tsy rariny, fihenam-bidy ary mifanaraka.
Amin'ny marika ankapobeny, i George dia nilamina, marina, ary tsy tia irery. Ny fiaraha-miasa dia tena zava-dehibe ho azy.
George Weah Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Fiadidiana
George Weah dia nihazakazaka ho filoham-pirenena Liberia ho mpikambana ao amin'ny Kongresy ho an'ny fanovàna demokratika ao 2005, saingy very tao anatin'ny fiatoana ho an'i Ellen Johnson Sirleaf avy amin'ny Antoko Unity. Tao amin'ny 2011 dia niverina tao amin'ny CDC indray izy, tamin'ity indray mitoraka ity ho filoha lefitra, fa i Sirleaf kosa nijanona tao amin'ny birao.
Nanjary resaka fanentanana ny tsy fahampian'ny fianarana an'i Weah. Tena nanakiana mafy an'ireo izay milaza izy fa tsy mety amin'ny fitondrana. Tamin'ny voalohany dia nilaza izy fa nahazo mari-pahaizana BA amin'ny "Management Sports" avy amin'ny Oniversite Parkwood any Londres, na izany aza, dia tsy ampy ny mari-pahaizana diplome izay manome mari-pankasitrahana tsy misy fianarana. Weah dia nanaraka ny diplaoman'ny fitantanan-draharaha tao amin'ny DeVry University any Miami.
Na dia eo aza ny tsy fitovian-kevitra politika, dia mbola misy olona malaza sy malaza ao amin'ny fireneny ihany i Weah. Tamin'ny Avrily 2016, Weah dia nanambara ny fikasany hisintona ny filohan'i Liberia fanindroany. Ny Football dia lasa filohan'i Liberia tamin'ny Desambra 2017 taorian'ny fandresena Filoha lefitra Joseph Boakai.
FACT CHECK: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaranay George Weah momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Daty efa namboarina: 10 martsa 2019